बिजनेस « Tuwachung.com
माइजोगमाई गाउँपालिकाका जितेन्द्र अधिकारीलाई आफूले गरेको कामबाट सन्तुष्टि मिलेन । कहिले कता, कहिले कता । न काम गरेअनुसार कमाइ हुन्छ, न सन्तुष्टि । सुरुमा ठेक्कापट्टाको
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–३ की मन्दिरा बर्तौलाले दूध बेचेर एक वर्षमासात लाख कमाए । बर्तौलाले आफूले पालेका तीन उन्नत जातका गाईबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ हजार ८९३ लिटर दूध बेचिन्
‘सुरुको वर्ष ?,’ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ डाँडागुठकी सुरेशकुमारी राईले सुनाइन्, ‘पाँच सय लगानी गरेर दुई सय रुपैयाँ कमाएँ ।’ त्यति भनिसकेपछि राई मज्जाले हाँसिन् । सयपत्री फूलको बीचमा उभिएर हाँसेकी
खजुरा गाउँपालिका­३ मनकामना बाँकेका मानबहादुर भण्डारीको परिवारको आम्दानीको स्रोत भनेको बट्टाईपालन बनेको छ । भण्डारीले व्यावसायिक रूपमा बट्टाई पालन गर्न लागेको धेरै समय भएको छैन तर मेहेनत र लगनले गर्दा
नेपाली युवकयुवती आफ्नो रोजगारीको गन्तव्य विदेश सम्झन्छन् । बिदेसिन पहल पनि गरिहाल्छन् । नेपालबाट रोजगारीका लागि दैनिकजसो बिदेसिने युवकयुवतीको लर्को लाग्ने गर्छ । इलामको माईजोगमाई–३ नयाँ बजारकी कुसुम दाहालले भने
लगन र परिश्रमसाथ काम गरेमा धन कमाउन विदेश होइन स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण विराटनगरका बुटिक सञ्चालकले दिएका छन् । काम गर्दा पनि आफूभित्रको गहिराइ र आफूवरिपरिको वातावरणचाहिँ बुझ्नुपर्ने
दिक्तेल (खोटाङ) । सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले कोदाको रक्सीलाई ‘ब्रान्ड’ बनाउन कानुनी र व्यावहारिक पक्षको अध्ययन थालेको बताइन् । मन्त्री राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई जानकारी
काठमाडौंदेखि सय किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा पर्ने सिन्धुपाल्चोक घुुम्न जाने निकै भेटिन्छन् । तर, तिनको भ्रमणलाई सुरुचिपूर्वक ध्यान दिई सहजता प्रदान गर्ने प्रबन्धमा जुटेकी कुसाङ शेर्पाको कला वास्तवमै उदाहरणीय छ । पछिल्लो
हलेसी (खोटाङ) । ‘बचत गर्ने बानी बसालौं, आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर होऔं’ भन्ने मूल नारासाथ जनहित हलेसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आठौं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । हलेसी तुवाचुङ
विद्यालय होस् या कलेजका विद्यार्थीले ‘एक्सपेरिमेन्ट विथ टी एन्ड कफी’ शीर्षाकृत कथा पढेकै हुनुपर्छ । चिया र कफी खान हुन्छ कि हुँदैन भनेर परीक्षण गर्दा नियमित खानेहरू चिया र कफी
‘बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने नेपाली उखान प्रचलित छ । बोल्नेको पीठो बिक्छ भनेर मेचीनगर–६ बर्मेली टोल झापामा रहेको ‘हड्डी कसम फ्रेस हाउस’ले गरेको विज्ञापनले चरितार्थ गरेको
रोजगारीको सिलसिलामा जापान पुगेका बागलुङको गलकोट क्षेत्रका व्यक्तिले जापानमै रेस्टुरेन्ट खोल्ने क्रम बढेको छ । जापानका मुख्य सहर टोकियो, नागोया र ओसाकामा धेरै गलकोटेले रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका छन् । रोजगारीका
काठमाडौं । के तपाईंलाई थाहा छ– तपाईं हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल पहिलोपटक कहिले प्रयोग भएको थियो ? त्यसबेला मोबाइल कस्तो देखिन्थ्यो होला ? मोबाइलको पहिलो प्रयोग ४७ वर्षपहिले १९७३ अप्रिल
महोत्तरीसहित मिथिला क्षेत्रमा दीपावली चाड केरा खेती गर्ने किसानलाई विशेष अवसर बनेको छ । दीपावली (तिहार)को मुख्य दिन मानिने लक्ष्मीपूजाका दिन घर–घरमा केराका थामबाट स्वागतद्वार बनाइने आमप्रचलनले किसानका लागि यो
कासेथुम्का, हलेसी (खोटाङ) । पाँच वर्षअघिदेखि ट्राफिक चोक हलेसीनजिकै एक घरमा इलामेली होटल सञ्चालनमा आएको थियो । होटल व्यवसाय राम्रै चलेको थियो । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले व्यवसाय
म्याग्दी । जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेमङ्गलेमा यो वर्ष भीरमौरीको मह बिक्री गरेर ४० लाख रुपैया भित्र्याइएको छ । कुइनेमङ्गलेका ३९ वटा साना–ठूला भीर पहरामा भीरमौरी पाइन्छ । ठूलो भीरमा एक
पसिनाको गीत गाउँदै जीविकोपार्जन गर्दाको आनन्द कस्तो होला ? त्यस्तो आनन्द अनुभूति गर्नुभएको छ ? छैन भने प्रविका राईलाई सोध्नुहोस् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा हलेसी टेलर्स सञ्चालन गर्दै आएकीराईले
बागलुङ । जिल्लाको पहिचान धेरै छन् । तीमध्ये जिल्लाको बुट्टेनली एक हो । जिल्लाको पहिचानका रूपमा स्थापित बुट्टेनली लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । बागलुङ भित्रिने जोकोहीले बुट्टेनलीबारे चासो राख्छन्
तौलिहवा । चाउरिन लागेको अनुहार । जिङ्ग्रिङ परेको कपाल । एउटा टिनको छानामुनि बस्दै आएका अधबैंशे दम्पती । कपिलवस्तुको वाणगङ्गा–४ का दम्पत्ती भीममाया र रुकबहादुर रेश्मीको पहिचान हो । गाउँमा